Kuunza mota kubva kuHong Kong kuenda kuUK | Yangu Mota Kunze
Uri kutarisa kuendesa yako kubva kuHong Kong kuenda kuUnited Kingdom?
Tinogona kubata maitiro ese ekupinza mota yako kubva kuHong Kong, kusanganisira kutumira kunze, kutumira, kubvumidzwa kwetsika, UK inland trucking, kuteedzera kuyedza uye kunyoresa kweDVLA. Isu tinobata maitiro ese, tichikuchengetera iwe nguva, dzichikunetsa uye zvisingafanoonekwe mitengo.
Hong Kong inzvimbo huru yekutumira mota, kunyanya kana uri kudzokera kuUK. Makotesheni edu anosanganisira zvizere Tora chitauro nhasi uye ngatibatei maitiro ese kwauri.
AD - AndorraAE - United Arab EmiratesAL - AlbaniaAR - ArgentinaAT - AustriaAU - AustraliaBE - BelgiumBG - BulgariaBH - BahrainBN - BruneiBR - BrazilBY - BelarusCA - KanadhaCH - SwitzerlandCL - ChileCY - KuproCZ - Czech RepublicDE - GermanyDK - DenmarkEE - EstoniaES - SpainFI - FinlandFK - Falkland Islands (Islas Malvinas)FR - FranceFX - France, MetropolitanGB - United KingdomGG - GuernseyGI - GibraltarGR - GirisiHK - Hong KongHR - CroatiaHU - HungaryID - IndonesiaIE - IrelandIM - Isle yeMunhuIT - ItariJE - JerseyJP - JapanKR - Korea, MaodzanyembaKW - KuwaitKY - Zvitsuwa zveCaymanLI - LiechtensteinLT - LithuaniaLU - LuxembourgLV - LatviaMC - MonacoMK - MakedhoniaMO - MacauMT - MaltaMX - MexicoYANGU - MalaysiaNL - NetherlandsHAPANA - NorwayNZ - NyuzirendiOM - OmanPH - PhilippinesPL - PolandPT - PortugalQA - QatarRO - RomaniaRS - SerbiaRU - RussiaSA - Saudi ArabiaSE - SwedenSG - SingapowoSI - SloveniaSK - SirovhakiyaTH - ThailandTR - TurkeyTW - TaiwanUS - United StatesVG - Zvitsuwa zveBritish VirginVI - Zvitsuwa zveVirginVN - VietnamZA - Chamhembe AfrikaZW - Zimbabwe
Ndeipi ZIP kodhi muAmerica? (Kana uchizviziva)
Ko mota yakambonyorwa kuUK here?
Pane chimwe chinhu here chaungade kuti tizive?
Chero ruzivo rwakawedzerwa nezvekutenga kwako zvinogona kutibatsira kutora zvakaringana. Sem Iwe mota yakambonyoreswa here kuUK zvisati zvaitika? ...
Isu tinounza huwandu hwakawanda hwedzimotokari kubva kuHong Kong kuenda kuUK tichimiririra vatengi vedu, zvichireva kuti isu tine ruzivo rwakakura uye hunyanzvi hwekunze mota yako futi. Isu tinopa complimentary muunganidzwa mukati meguta miganhu asi tinogona kuwedzera chita kuti utore mota yako kubva kumberi munda mune pane chako chikumbiro. Isu tinotakura mota tichishandisa zvakagovaniswa midziyo, zvichireva kuti iwe unobatsirwa kubva pamutengo wakadzikiswa wekufambisa mota yako kuenda kuUK nekuda kwekugovana mutengo wemudziyo nedzimwe mota dzatiri kuendesa panzvimbo yevatengi. Midziyo yekutakura inzira yakachengeteka uye yakachengeteka yekupinza mota yako uye mota yako iri mumaoko akachengeteka nesu.
Pakununura mota kubva kuHong Kong, kune nzira ina dzakasiyana dzekubvisa tsika muUK, zvinoenderana nekwakatangira mota, zera uye mamiriro ako.
Uri kudzokera kumashure semunhu anotamisa achienda kuUnited Kingdom? Kana iwe uine yako mota kweinopfuura mwedzi mitanhatu uye uine humbowo hwekugara muHong Kong uchitambanudza kumashure gumi nemaviri mwedzi - ipapo kupinza kwako muzviitiko zvakawanda hakuzovi pasi pekupinza mutero nemitero.
Kune mota dziri pasi pemakore gumi kubva kuHong Kong, mota yako inofanirwa kutevedzera UK mhando yekubvumidzwa. Kuti uite izvi, chako chinoda kuve neiyo IVA bvunzo. Isu tisu chete nzvimbo yekuyedza pachivande muUK, zvichireva kuti hauna nguva refu yekumirira inosanganisirwa nenzvimbo dzekuyedza dzehurumende dzinoshandiswa nevamwe vanopinza mota kuUK.
Motokari yega yega yakasiyana uye mugadziri wega ane zviyero zvakasiyana zvekubatsira vatengi vavo kuburikidza neyakaitwa nzira, saka ndokumbirawo utore chitauro kubva kwatiri kune yako chaiyo mota yekupinza.
Hong Kong mota dzinogona kuda kumwe kugadziridzwa, kusanganisira kushandura iyo yekumhanya kuti iratidze MPH uye yekumashure mhute mwenje chinzvimbo kana chisati chave chinowirirana pasi rese.
Yedu yekubvunza timu ine ruzivo rwakakura rwemotokari, ichivabvumidza kunyatso fungidzira izvo zvinodiwa kuti upinze kubva kuHong Kong kuenda kuUK.
Vanopfuura gumi-makore-makore mota vane mhando mvumo isingabhadharwe, asi zvichiri kuda MOT bvunzo uye zvimwe zvakagadziridzwa zvinodiwa kune IVA bvunzo isati yanyoreswa. Izvo zvinogadziriswa zvinoenderana nezera asi kazhinji zviri kumashure kweshure kwemwenje.
Zvinodhura zvakadii kupinza mota kubva kuHong Kong?
PaMotokari Yangu Inotakura tinopa sevhisi yekunze yakakwana, zvisinei, zvirevo zvese zvinofungidzirwa kune yako chaiyo mota nezvinodiwa. Usanonoka kupinda mukutaurirana pasina chinosungirwa kuchikosha kupinza mota yako kubva kuHong Kong kuenda kuUnited Kingdom.